October 2013 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
အိုင်တီသားလေး at 9:28:00 PM 1
Ebook Ebooks Hacking Hacking စာအုပ်
Pyae Phyo at 9:08:00 PM 0
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော် (YGNBlogger) ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ Upload Speed ကတော့ ကျွန်တော်တို့ Blogger တွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်လို Blogger မျိုးတွေအတွက် အခက်အခဲနည်းသွားအောင် Upload Speed မြှင့်နည်းတွေ့ထားပါတယ်။ ပိုပြီးသိချင်ရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုက်ပေါ့ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ။
I Phone latest Firmware!
aung koe at 4:31:00 PM 2
ကျွန်တော်မတင်ဖြစ်တော့ပဲတော်တော်ကြာသွားတယ်...အခုတော့ကျွန်တော် I phone သမားများအတွက် I phone4ရဲ့ latest firmware များကိုတင်ပေးလိ်ုက်ပါတယ် GSM ရော CDMA အတွက်ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ် itunes နဲ့ itools latest တွေပါပါတယ်ခင်ဗျာ လိုအပ်သူများအောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီဗျာ.....ဒေါင်းရလွယ်ကူအောင်လည်းကျွန်တော် mediafire link မှ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်...အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ.....
iTunes 11.1 32-bit
iTunes 11.1 64bit
Ebook Ebooks Windows Windows 8
Pyae Phyo at 2:51:00 PM 1
Introduction to Windows Registry စာအုပ် (မြန်မာလို)
အိုင်တီသားလေး at 3:44:00 PM 0
ဆရာမောင်ထူးချွန်ရေးသားထားတဲ့ Introduction to Windows Registry ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါ။ Registry ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ် လုပ်သလဲ၊ ကွန်ပျူတာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ Registry error တွေကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ Registry ကိုပြင်ဆင် အသုံးပြုခြင်း နှင့် ကွန်ပျူတာကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ Registry အကြောင်းကို ပြည့်ပြည့် စုံစုံလေ့လာ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Registry ပိုင်ရင် ကွန်ပျူတာကို နိုင်တယ်လို့တောင် အဆိုရှိတယ် ဆိုတော့ အားလုံးပဲလေ့လာကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။
အိုင်တီသားလေး at 4:11:00 PM 0
iOS iOS Software
ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူများအတွက် Myanmar Bible 1.0 IPA (iPhone/iPad/iPod free download)
Pyae Phyo at 2:18:00 PM 0
အခုတော့ ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းပါ။ ကျွန်တော်က ခရစ်ယာန် ကိုးကွယ်တာမဟုတ်တော့ ဒီလိုအကြောင်းတွေနားမလည်တာကို သည်းခံပေးပါ။ ကျမ်းစာအုပ်တွေကို offline အနေနဲ့ဖတ်လို့ရပြီ။ နိုဝင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့ ၂၀၁၂ တုန်းကထုတ်ထားတာပါ။ ဆော့ဝ်လ်ရေးသားသူက Bue Bu ပါ။ ပိုပြီးသိချင်ရင်တော့ http://adf.ly/Y2P7O မှာဖတ်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
- Buttons to go to the next/precious chapter.
- Double tap to read fullscreen.
Lock/Unlock Phone Application SONY
Sony Xperia Booloader Unlock Tool
Sony Xperia Booloader Unlock Tool ဖြစ်ပါတယ်..
Windows Computer မှာ သက်ဆိုင်ရာ Driver တင်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်..
ဖုန်းမှာ USB Debugging On ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်..
သက်ဆိုင်ရာဖုန်းအလိုက် Bootloader Unlock Code ရပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်..
မရသေးရင် http://unlockbootloader.sonymobile.com မှာ တောင်းနိုင်ပါတယ်..
Sony ဖုန်းတွေမှာ Bootloader Unlock တောင်းဖို့အတွက် သိထားရမယ့်အချက်တွေကတော့
1. ဖုန်းခေါ်တဲ့ Dail Pad မှာ *#*#7378423#*#* လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Service Mode ဝင်လိုက်ပါ.
2. Service info > Configuration > Rooting Status ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ.
3. Bootloader unlock allowed - Yes ဆိုရင် Unlock လုပ်လို့ရတဲ့ Sony ဖြစ်ပြီးတော့ No ဒါမှမဟုတ် ဘာမှ မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ Bootloader Unlock မရပါဘူး..
ရနိုင်တဲ့ဖုန်းဆိုရင်တော့ IMEI, MEID နံပတ်တွေနဲ့ အပေါ်မှာပေးခဲ့တဲ့လင့်မှာ ကုဒ်တောင်းနိုင်ပါတယ်..
2. Fastboot ဝင်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပါ...
အောက်မှာပေးထားတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားအလိုက် Button ကိုနှိပ်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်တာကို Fastboot ဝင်ပြီး ချိတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်..
3. ပြီးရင် ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Unlock Tool ကို Run ပြီး ရထားတဲ့ကီးဖြည့်ကာ Unlock လုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ..
ဖုန်းအမျိုးအစား : နှိပ်ရမယ့် Button
Sony Ericsson Live with Walkman™ Sony Xperia™ S: Volume up button
မောင်ပေါက် at 9:48:00 AM 12
"လွင်မိုး ခရီးသွားနေသည် " ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေး သဘောကျလို့.. ဒီခေါင်းစဉ်လေး ပေးမိတာပါ.. 20.10.2013 ရက်နေ့ကနေ 4.11.2013 ရက်နေ့ထိ မောင်ပေါက် ခရီးသွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်.. သွားမယ့်နေရာက တောင်ကုတ်မြို့ကနေ တစ်ဆင့် ဇာတိ ကျေးရွာဆီကိုပါ.. ဇာတိက ဖေါင်းခါး ဆိုတဲ့ရွာလေးဖြစ်ပြီး အမေ၊ အဖေ နဲ့ မတွေ့ဖြစ်တာ ၁၀ နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ.. 22.10. 2013 ရက်နေ့ တောင်ကုတ်မြို့ကို ရဲအောင်လံ ကားနဲ့ ရောက်ပါမယ်.. အဲဒီကနေတစ်ဆင့် ရွာကို သွားပါမယ်.. ဒါကြောင့် ရွာကို အလည်ပြန်နေစဉ်မှာ ဘလော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ တောင်းဆိုထားတာတွေကို မဖြေနိုင်၊ မပေးနိုင်ခဲ့ရင် နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်.. ကျွန်တော်ခရီးသွားနေပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ တွဲဖက် Admin တွေက ပို့စ်တွေကို တင်ပေးသွားကြမှာပါ... ကျွန်တော်မရှိပေမယ့် ကြော်ငြာလေးတွေကိုတော့ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်စီ ဝင်ကြည့်ပေးသွားကြဖို့လည်း မိတ်ဆွေများကို လေးစားစွာ တောင်းဆိုပါရစေ.. အဆင်မပြေတာများရှိရင်လည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်ကြဖို့ ဒီပို့စ်လေးနဲ့ပဲ ၁၅ ရက်ကင်းကွာနေမယ့် ဘလော့မိတ်ဆွေများကို နှုတ်ဆက်ပါတယ်.. ပြန်လာရင် ပြန်ဆုံကြတာပေါ့..
အားလုံးသော မိတ်ဆွေများကို အစဉ်လေးစားခင်မင်လျက်
Battery အားကောင်းစေဖို့ Battery Master - Battery Doctor Pro v.1.1 ipa (iPhone/iPod/iPad download)
Pyae Phyo at 8:03:00 PM 0
Battery ကိုကြာကြာခံမယ့် iOS သမားတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါ။ ဒီဆော့ဝ်လ်က လွယ်ကူတဲ့အတွက် iPhone ကိုင်တဲ့သူတိုင်းဆောင်သင့်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ ipa လေးပါ။ ပိုပြီးသိချင်ရင်တော့ http://adf.ly/XqzCN မှာဝင်ဖတ်ကြည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Ebook Ebooks Hacking Hacking စာအုပ် Mobile ဆိုင်ရာစာအုပ်
Pyae Phyo at 2:53:00 PM 0
ဒီတစ်ခါထုတ်မယ့် Ebook ကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးရတာမို့လို့ ပြန် share မယ်ဆိုရင်တော့ credit ပြန်ပေးခဲ့ပါ။ Mobile Phone battery အကြောင်းကို ၁ရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးရေးရပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုက်က 2mb ရှိပါတယ်။ စာမေးပွဲမဖြေမီတုန်းက စုပြီးတော့ ခုမှ အစအဆုံးရေးဖြစ်တာပါ။ အောက်က နည်းလမ်းများကို လည်းကြည့်ပါဦး။ အောက်ပါအတိုင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
$1.99 ဖြင့်ရောင်းသော Pou .ipa (iPhone/iPod/iPad game) ကို Free ရယူနိုင်ပါပြီ
Pyae Phyo at 7:34:00 PM 0
Android အတွက် ဒီမှာ တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ iOS မှာတော့ Android လို Free မပေးပါဘူး။ iOS မှာတော့ $1.99 နဲ့ရောင်းချနေပြီး ဒီမှာတော့ Free ပေးပါတယ်။ Game ကတော့ အကောင်လေးမွေးမြူပြီးတော့ အပြင်မှာ လုပ်ပေးရသလိုပဲ သူလည်း ခံစားမှုရှိပါတယ်။ ပိုပြီးသိချင်ရင် http://adf.ly/XnKgc မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Ebook Ebooks Speedup winodws Windows Repair
Pyae Phyo at 5:27:00 PM 0
ကျွန်တော်အခု Blue Screen Error နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ပြဿနာအချို့တွေကို စုဆောင်းပြီး ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်။ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာက စုစုပေါင်း အရွက် ၂၀ ရှိပါတယ်။ YGNBlogger (Pyae Thaw) ကိုယ်တိုင်အားလုံး ရေးထားတာမဟုတ်ပေမယ့် အဲ့ပြဿနာဖြစ်ရင် ပြန်ရှာလို့လွယ်အောင် တမင်ပြန် တင်ပေးထားတာပါ။ ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
iPhone 5S တွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော Blue Screen Error ကိုဖြေရှင်းနည်း
Blue Screen Error Codes များနှင့် အဓိပ္ပါယ်
Blue Screen Saver ဖြင့် Error ရှင်းနည်း
Blue Screen Error မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်နည်း
ပိုပြီးသိချင်ရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Apple store တွင် $0.99 ပေးရသော MMkeyboard 1.3.2 .ipa ကခုဒီမှာ Free ရပြီ
Pyae Phyo at 7:57:00 AM 1
iOS7ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများထဲက တစ်ခုပါ။ ပိုက်ဆံပေးရတယ်ဗျာ။ Apple Store မှာတော့ $0.99 ပေးရပြီး ဒီမှာတော့ Free ဖရီး ပါ။ မယုံရင် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ သူများဆိုဒ်တွေက Review ပဲပြနိုင်တယ် ပြန်ပြီး Free အဖြစ် ပြန် share တာတော့မတွေ့သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်က စေတနာနဲ့ပြန် share ပေးတာပါ။ ပိုပြီးသိချင်ရင် http://adf.ly/XlUpS မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
---Min Ga Lar Par---
A magical and revolutionary app which allows you to type ZawGyi font and read Zawgyi font in the app* without needing to Jailbreak your devices ...
Read the descriptions below before buying...
♥♥♥Over 4000 downloads worldwide♥♥♥
FYI: This doesn't work like "International Keyboard".
Initial release date: 15th Nov
♡♡♡ NO:1 Top Paid Utilities in Singapore Store. //17th Nov-- 24th Nov
As you may know the iPhone or iPad doesn't come withanative Zawgyi Keyboard. so, here you go, the alternative.
**** IMPORTANT: You will only see squares OUTSIDE the app if you don't have zawgyi installed in your device which can be done only if you jailbreak your device.****
❖❖❖ Thank you so much for purchasing and kind words. It meansalot to me ❖❖❖
MMKeyboard == More than justakeyboard!
MyanmarSar, MyanmarSar, MyanmarSar
Who doesn't love to type burmese in iPhone or iPad?
Just by looking at the screenshots won't satisfy you. Using with your hands speaks lounder than that.
Brought to you by moeZ, developer from Myanmar.
It'samust-have for Burmese idevice user. :)))
♥♥♥ Features:♥♥♥ [[[
1: ✈✈ Type Myanmarsar just like native iOS keyboards, copy and paste it anywhere . SMS to another device which can read zawgyi.
2: ✈✈ Read MyanmarSar on non-jailbroken device. (Copy those texts from websites and Click Read Button. and then you can read those texts on non-jailbroken device)
3: ✈✈ Email Those Texts right from the app
4: ✈✈ Browser Myanmar website inside the app
5: ✈✈ BlueTooth Chatting ]]]
6: ✈✈ Direct post to Facebook and Twitter
❈☆✷ What those burmese be-testers and users say:
"Whatawonderful app! I have bought right now :D"
" I really support who develops Myanmar font program. I hope one day Myanmar font will become international, apple will put in the system."
"Now I can read my Burmese language RSS feeds without having to jailbreak my phone."
"Thank you, I needed it so bad cos I typealot of Burmese fonts. The best 99 cents i've ever spent."
"I like it more because I don't need to know Zawgyi Layout to type out!"
☂☂☂ Your 5-star review keeps the updates coming ☂☂☂
Ebook Ebooks Gmail and Gtalk
Pyae Phyo at 7:53:00 PM 4